Eyona Grimoire yokugqibela yeMimoya kunye noMlingo-iLizwe leAmulets
UKUNIKA AMANDLA OBUGCISA KUBO BONKE
Emva kwamashumi eminyaka yovavanyo, ukudibanisa kunye nokwabelana nabavavanyi be-beta, sagqiba ekubeni sikhulule i-grimoire yethu yemimoya kunye nomlingo eluntwini ngokubanzi. Yile grimoire efanayo siyisebenzisela ukupela, ukumiliselwa kwezinto, ukwenza amakhubalo asebenze kunye nemisesane, enyanisweni bonke umlingo esiwenzayo. Sifuna ukuba ube nayo kwaye uyisebenzise ukuphucula zonke iinkalo zobomi bakho.
Le grimoire inkulu inamaphepha angama-300 omlingo.
466 Amandla eMantras
80+ imimoya kunye Enn yabo ethile (mantra).
Iminikelo ethile kuye ngamnye kubo.
Ubuncinci be-3 incantations yamandla kumoya ngamnye.
Ikhadi lesicelo eliprintwayo kumoya ngamnye.
Izithethe ezikhethekileyo nezizodwa.
Usebenza njani kunye neMimoya yeOlimpiki esixhenxe.
Uzenza njani ezakho iiamulets.
Akukho mfuneko yezithethe ezintsonkothileyo.
Akukho mfuneko yamava
Akukho mfuneko yezixhobo ezikhethekileyo Amasiko anamandla kwaye akhawulezayo
Akukho mfuneko yezivumelwano
Akukho mlilo wasemva
The Ultimate Grimoire of Magic - 466 Power Enn kunye 80+ imimoya
LE GRIMOIRE IYA KUWENZA NJANI UMHLUKO OMKHULU EBOMINI BAKHO?
Le grimoire kunye nomlingo onamandla oqulethwe kuyo kuya kukunceda ukuba ulawule zonke iinkalo zobomi bakho. Kukho amandla angama-466 e-Enn aqukiweyo adala amandla akhethekileyo kwaye adibanise namandla omoya. Kufuneka ukhethe kuphela leyo oyifunayo kumzuzu ngamnye wobomi bakho. Umzekelo ukuba ufuna ukuphumelela kwishishini ungakhetha nawaphi na amandla ka-Enn kaBeliali. Onke amandla enn kunye nezithethe zilula kakhulu ukwenza kwaye onke amanqanaba omlingo angayenza le nto.
Kukho ii-enns zothando, ii-enn's zemali, ii-enn zobudlelwane, ii-enn zokuphilisa, ii-enn zokufunda, ii-enn's zamandla, kunye nokunye okuninzi kangangokuba akunakwenzeka ukwenza uluhlu olupheleleyo apha. Kukho 466 amandla enn's kule grimoire eyodwa kwaye siqinisekile ukuba ungafumana ngaphezu kwesinye esilungele iimfuno zakho ngalo mzuzu nakwixesha elizayo.
Ezi zezimbalwa zeemantra zamandla ezingama-466 onokuzifumana kwigrimoire:
Le grimoire iya kuthatha ubomi bakho kwelinye inqanaba
Imimoya ebandakanyiweyo kule grimoire yile:
Agares, Aim, Alloces, Amdusias, Amon, Amy, Andras, Andrealphus, Andromalius, Asmoday, Astaroth, Azazel, Bael, Balam, Barbatos, Bathin, Beelzebhube, Beleth, Belial, Berith, Bifrons, Botis, Buer, Bune, Camio, Cimejes, Crocell, Dantalion, Decarabia, Eligos, Focalor, Foras, Forneus, Furcas, Furfur, Gaap, Samigina, Glasya-Labolas, Gremory, Gusion, Haagenti, Halphas, Haures, Ipos, Leraje, Lilith, Lucifer, Lucifuge, Malpha Rofosca , Mammon, Marax, Marbas, Marchosias, Murmur, Naberius, Orias, Orobas, Ose, Paimon, Phenex, Purson, Raum, Ronove, Sabnock, Sallos, Samigina, Seere, Shax, Sitri, Stolas, Volac, Valefor, Vapula, Vassago , Vepar, Vine, Vual, Zagan, Zepar, Zurix,